Rajada Macdanta ee 2018 - Blockchain News
Seeraar, ICO, Mining, Cryptocurrency
Rajada Macdanta ee 2018
Blockchain Development Tababar ku
Iyada oo fiiro gaar ah u koritaanka cryptocurrency, baahida loo qabo qalabka macdanta ayaa kor u kacay iyo sidoo. A dhowr sano ka hor mid kasta oo lahaa helitaanka computer awood ku filan u noqon karta macdan qode, halka sanadkii la soo dhaafay xaaladda ay haatan si wayn bedelay iyo habab hore ee macdanta horay u noqon natiijo la'aan. Waxaan u saadaaliyay waxa macdanta isbeddellada noqon lahaa kuwa ugu caansan ee 2018.
Kaararka Graphics for macdanta
Maanta qalab qaali u baahan yahay macdanta, khaas ahaan, kaararka garaafyada. June ee la soo dhaafay Chinese online madal ganacsiga AliExpress sheegay in dadka isticmaala ay bilaabeen in ay eegaan ka badan si firfircoon for moodooyinka gaarka ah ee kaararka garaafyada ku yiil ugu haboon abuuro beeraha macdanta. The lagu daydo ugu caansan ka mid ah macdan qodayaasha Ruush yihiin kaararka-GeForce naqshadeynta Nvidia GTX 1060 iyo GTX 1070, iyo sidoo kale Radeon RX480, macmalay by Advanced Micro Devices (AMD).
Iyada oo lagu daydo, kuwaas oo isagoo caan ah ma ahan oo keliya mid ah macdan qodayaasha Ruush, sano ee la soo dhaafay lagu calaamadeeyay saamiyada AMD ayaa kacday, 64%, halka qiimaha securities Nvidia Corporation ku dhowaad helay 88% tan iyo bilowgii 2017. Khubarada ayaa sheegaya in koritaanka waxa u sabab ah in la kordhiyo tirada macdan qodayaasha ee shabakadda Ethereum iyo cryptocurrencies caan kale. Nvidia daabacay xogta in muujinayaa 6.7% dakhliga for quarter labaad ee 2017 laga helay naqshadeynta kaararka iibka, kaas oo la isticmaalo macdanta crypto. Taasi waa sababta labadan shirkadood iyo shirkadda ASUS ayaa hore u bilaabeen in ay soo saaraan kaarka naqshadeynta gaar ah loogu talagalay macdanta cryptocurrency. Sidoo kale, xagaagii hore waxaan ogaa in AMD waxaa ka shaqeeya on 7nm 48 processor core loo yaqaan Starship in la sii dayn doono 2018.
khubarada, si kastaba ha ahaatee, digo macdanta saarayaasha qalabka dalbadaan alaabooyinka ay u socoto si ay u Khushuucsan. Sida laga soo xigtay Yuusuf Moore, oo ah falanqeeye ah bangiga shirkadda American haysta Morgan Stanley, macdanta laga yaabaa inay noqdaan dhaqdhaqaaqa dhaqaale aan wax tar lahayn in 2018.
“Waxaan aaminsanahay in guud ahaan muuqaallo kale iibka macdanta ethereum in 2017 noqon doontaa $800 million ama si, iyo hoos u dhici doonto by 50% 2018.”
In opinion Moore ee, sababta ugu horeysay u dhac tani waa hoos u qorsheysan in abaalmarinta block guud on shabakad ethereum ka 5 Citaah in 3 Citaah. Ku labaad waa wareeg ka Cadayn Work (PoW) si Cadayn saamiga (POS) marka halkii xoogga macdanta, itimaalka ee abuuraya block a iyo helaya abaal marin la xidhiidha saami la user ah ee saamiga lahaanshaha nidaamka. Vijay Rakesh, oo ah falanqeeye ah ee bangiga maalgashiga Japanese Mizuho, sidoo kale xusay janjeera in this. Isagu waa hubiyo in qeybtii hore ee 2018, Kaararka muuqaallo kale mar dambe loo baahan yahay, waayo, macdanta cryptocurrency sida macdanta ether.
“Waxaan aaminsan nahay in ethereum u muuqataa in ay u guuraan habka xaqiijinta bixinta kala duwan ee lixda bilood ee soo socota, ka Caddeyn-of-Work iyadoo la isticmaalayo kaararka naqshadeynta in Caddeyn-of-saamiga halkaas oo kaararka garaafyada mar dambe waa loo baahan yahay.”
Mashruuca ayaa ah bedelayaan hab maamuuska loo dhanyahay ee network Ethereum waxaa lagu magacaabaa Casper. Waxa ay tilmaamaysaa in qalab computer khaas ah waxaa mar dambe ma loo baahan yahay in la abuuro block cusub; halkii, dadka isticmaala ay awoodaan in ay bixiyaan lacag u gaar ah in la kaydin doono in muddo ah uu noqon doono, iyo in soo laabashada, waxay heli doonaan fursad inay ka qayb qaataan xawaalad xaqiijin. Sayidka, Casper abuuri doona nidaam ah in iska caabin ah ayaa laga yaabaa dhexe macdanta. Marka Constantinople xiga fargeeto, kaas oo ka dhici karaa bilowga 2018, qaadataa meel, update network Ethereum ka shaqeysiin doonaan.
Inkastoo isbedelka iman kara hab maamuuska loo dhanyahay ee network Ethereum ku, madaxa Nvidia, Juan Zhjensjun, waa la hubiyo in dakhliga ka soo GPU dhigay (unit naqshadeynta processing) iibka macdanta crypto sii joogi doono, tilmaamayaa cryptocurrencies iyo blockchain yihiin “halkan si aad u sii joogo.”
“Tani waa suuq aan u badan tahay inay tagaan waqti dhow, oo waxa kaliya oo laga yaabaa in aan ka filan karaa waa in ay jiri doonto lacagaha ka badan inuu yimaado. Waxay u iman doontaa in badan oo dhan wadan oo kala duwan. Waxaa soo bixi doona waqti ka waqti, oo GPU waa runtii arrin weyn, waxaa ka.”
ASIC (Codsiga-gaarka ah Integrated Circuit) jirta qaab chips loo abuuray inay macdanta wax ku ool ah iyo sidoo kale. ASICs waxaa loo isticmaalaa qalab gaar ah oo lagu fuliyo hawlaha adag ku koobnayn, taas oo ka dhigaysa fulinta hawlahaas jaban iyo si dhakhso ah. chips waa awood dheeraad ah iyo Cunidda tamar badan ka yar; waxay marar badan ka badan faa'iido badan kaararka garaafyada yihiin. Waxaa intaa dheer, beeraha macdanta u baahan waqti dheeraad ah si ay u qaataan on shirka iyo dhamaystirka, halka la ASIC-macdan qodayaasha aad oo dhan.
Sanadkan waxaa loo waxyooday in shirkadaha, sida Samsung, Intel, TSMC, iyo Foundries Global, ayaa soo koraya chips 7nm for macdanta ASIC. wax soo saarka Chips ayaa la qorsheeyay bilood ee ugu horreeya ee 2018. Waxay yeelan doonaan tamarta fiicnaaday la chips 14nm hore marka la barbar dhigo.
Rafaa Internet Japanese siibtey ayaa qorshaynaysa in ay bilowdo a ASIC-Miner cusub oo sal u noqon on chips 7nm. wax soo saarka chips Mass la technology tani waxaa la qorsheeyay May 2018. Sannadka soo socda siibtey lagu daahfuri doonaa ICO inay iska iibiso loox macdanta-galinaya jiilka xiga. Waxay soo saari doonaa calaamadihii sidii hab si ay u iibsadaan loox macdanta-galinaya jiilka xiga. Ka sokow, shirkadda ayaa qorshaynaysa in ay dhisaan xarun macdanta ee Northern Europe:
“Waxaan shaqayn doonaan xarunta macdanta-galinaya jiilka xiga ah isticmaalka tamarta iyo goynta-ku laayeen chips Semiconductor la cusboonaysiin karo ee Northern Europe. Waxaan u isticmaali doonaa goynta-ku laayeen 7nm technology habka for chips in la isticmaalo geedi socodka macdanta, oo si wadajir ah uga shaqeeyaan in ay cilmi-baarista iyo horumarinta iyo wax soo saarka la Wadaage isbahaysiga our isagoo technology design Semiconductor.”
Last September, Ruush Miner quful (RMC) ICO sameeyay si ay u taageeraan wax soo saarka ee Sunrise qode cusub chips Bitfury oo horumariyaan qode Multiclet cusub la qori la mid ah. ICO The ururiyay $43.2 million. RMC ku lug 15 ganacsato iyo cryptocurrency u dhaqdhaqaaqa iyo mideeya afar guuto ah, oo ay ku jiraan MultiClet, SMARTHEAT, Goodwin, iyo RadiusGroup. Shirkadda ayaa ku soo bilowday wax soo saarka Miner Sunrise iyo, by xagaaga soo socda, ku tala-si ay u horumariyaan a Multiclet processor-galinaya jiilka xiga, kaas oo noqon doona 35 jeer ku ool ah waayo macdanta.
Waxaa iska cad in qalab awood badan oo qaali ah, kaas oo aad u tamar aad u gubaya, waxaa loo baahan yahay guul macdanta. Taasi waa sababta shirkadaha yeelatay nooca kale ee macdanta, loo yaqaan daruur macdanta. Shirkadaha xarumaha xogta awood siiyaan qalab, oo in macaamilka final kiraysan khayraadka. Mar haddii heshiiska la soo gabagabeeyay iyo adeegyada waxaa la bixiyaa, Shirkadaha sida Hashflare, Genesis Macdanta iyo IQMining bixiyaan helitaanka macdanta dhowr cryptocurrencies.
Adeegyadan waxay hore u yihiin rayn. Ma jirto sabab ay aaminsan yihiin in habkani hoos u dhigi doono 2018, sida macdanta daruurtii waa la awoodi karo ah, lagu kalsoon yahay, iyo sida ku haboon si ay u helaan cryptocurrency, in uma baahna qalab qaali ah. Waxaa jira qaar ka mid ah cillado suurto gal. iibiyaha of heshiisyada daruur macdanta noqon kartaa cadaalad daro; site a bixiya noocan ah ee adeega waxaa laga yaabaa inay u nugul weerar jabsiga; users lahayn gacanta lacag komishanka ay helaan for macdanta; Oo weliba, khasaare aan la qorshayn ku qasbi karta xarunta xogta in ay dib u yar in dadka isticmaala ay bixiyaan hoos heshiisyada socda.
Currently, sharciyada ma waxaa maamulo hawlaha macdanta ee Russia iyo dalalka kale ee ka mid ah. The amar Madaxweynaha Ruush, si kastaba ha ahaatee, ayaa sheegay in Dowladda iyo Bangiga Dhexe oo waxay yeelan doonaan in la dhiso canshuuraha iyo si diiwaangelinta shirkadaha macdanta xagaaga soo socda. Dadaalkan filayo gudbin doonaa labada shirkadood iyo macdan qodayaasha gaarka loo leeyahay.
Bishii December, Guddoomiyaha ku hoos Madaxweynaha Ruushka ku saabsan badbaadinta xuquuqda ganacsi, Boris Titov, la soo jeediyay inay soo bandhigto canshuurta on macdanta crypto at heerka of 14%.
Waa Maxay Network Unboxed? Unboxed – a Massive Market Brands are spending
altcoins Seeraar block silsilad BTC daruur macdanta co loo arkaa coin Coinbase crypto cryptocurrencies cryptocurrency ethereum sarrifka hardfork ico litecoin ma qode macdanta network cusub news madal maamuuska Cabidkariin raacay telegraam Calaamad calaamadihii ganacsiga jeebka
Powered by WordPress iyo Wellington.